စည်းစိမ်ဥစ္စာ၏ဘုရင်မ | Coinfalls ကာစီနို
စည်းစိမ်ဥစ္စာ၏ဘုရင်မ အတူသင်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်တောက်ပ slot ကဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် 117,649 အနိုင်ရမှ Megaways. ကျော်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ6x က7ရက်ကြောင့်မှားယွင်းဇယားကွက်, ဒီ Big အချိန်ဂိမ်း powered အလှတရားအပြည့်အဝရက်ကြောင့်မှားယွင်း Wild နှင့်တစ်ဦးရက်ကြောင့်မှားယွင်း Clone အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူကြွလာ. အဆိုပါဂရပ်ဖစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြတ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ရက်ကြောင့်မှားယွင်း adorning ရတနာ-ထားတဲ့သင်္ကေတများနှင့်အတူသူတို့ကိုရန်တော်ဝင်ခံစားရှိ.
Big အချိန်ဂိမ်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသစ်တခုတွေဟာလည်းဖြစ်ပြီးယခုလည်းအွန်လိုင်း Blackjack နှင့်ကစားတဲ့သည်အထိတဆယ် slot ကဂိမ်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်. သြစတြေးလျအခြေစိုက်, ဆစ်ဒနီ, သူတို့ကကမ္ဘာအနှံ့ပြန့်နှံ့ကမ္ဘာကျော်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏ပုံစံအတွက်ဖောက်သည်များ. သူတို့ရဲ့ဂိမ်းကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်ပြောပြီထက်ပိုနှစ်ဆယ်ဘာသာစကားများရရှိနိုင်ပါသည်.
စည်းစိမ်ဥစ္စာ၏ဘုရင်မ တစ်မူထူးခြားတဲ့ရက်ကြောင့်မှားယွင်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူကြွလာစေတဲ့အလွန်အထင်ကြီးရှာဖွေနေ slot ကဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာရှိပါတယ်6အတူရက်ကြောင့်မှားယွင်း7ဒါကြောင့်အသီးအသီး၎င်းပြင်သင်္ကေတများ. ဤရွေ့ကားသင်္ကေတများ Horus ၏မျက်လုံးပါဝင်, Scarabs, ရိုင်းအဖြစ်ပြုမူသူကိုဘုရင်မကြီးသူ့ကိုယ်သူနှင့်အတူ ra Jewel. ဂိမ်းတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခံစား classy နှင့်ဇိမ်ခံအရာအားလုံးကိုတစ်ဦးညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ mesmerizing ဘုရင်မခြေရင်းဂိမ်းထဲမှာဆိုအနိုင်ပေးများအတွက် 7x မြှောက်ကိန်းဖြစ်ထွန်းနှင့်လျင်မြန်စွာအပြည့်အဝရက်ကြောင့်မှားယွင်းရိုင်းစေရန်တစ်ရက်ကြောင့်မှားယွင်းအပေါင်းတို့၌သင်္ကေတများအစားထိုး. ဒါကြောင့်သင်အသုံးပြုနေတဲ့တစ်အနိုင်ရပေါင်းစပ်စေလျှင်2ရိုင်းသောရက်ကြောင့်မှားယွင်း, သင်တစ်ဦးချောမော 49x မြှောက်ကိန်းအရ. The pyramid symbol is the only symbol that pays even if you land two of them on the adjacent reels. အဲဒီမှာအခြားကိုးသင်္ကေတများရိုင်း မှလွဲ. ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ခြောက်ခုကစား card ကိုသင်္ကေတများအပါအဝင်. သူတို့ရဲ့ဆုကြေးငွေကို paytable ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် check လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်.
ရက်ကြောင့်မှားယွင်းကိုယ်ပွား feature ကိုမဆိုလှည့်ဖျားပေါ်မှာကျပန်းရာအရပ်ကိုကြာ. ဤတွင်ရက်ကြောင့်မှားယွင်းခြောက်ခုတူညီရက်ကြောင့်မှားယွင်းအထိထုတ်လုပ်များပြား. ထို့အပြင်, အပြည့်အဝရိုင်းရက်ကြောင့်မှားယွင်းလည်းတက်ထုတ်လုပ်များပြား5အပြည့်အဝရိုင်းရက်ကြောင့်မှားယွင်းပြီးကျပန်းမြှောက်ကိန်း၏စုံသူတို့ကိုရန်လျှောက်ထားရရှိ.
Megaways သငျသညျကိုထောက်ပံ့ပေး 117,649 ပေါင်းစပ်အနိုင်ရအောင်နည်းလမ်းများ. ဤသည်ကြောင့်ကျယ်ဝန်းရက်ကြောင့်မှားယွင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာ i.e သာဖြစ်နိုင်6ရက်ကြောင့်မှားယွင်းခြင်းနှင့်7သင်္ကေတဇယားကွက်.
စည်းစိမ်ဥစ္စာ၏ဘုရင်မ ၏ကစားသမားရာခိုင်နှုန်းဖို့တော်တော်လျောက်ပတ်သောပြန်သွားပါတယ် 96.9. ဒါကြောင့်ကစားရန်အသုံးပြုသောနိမ့်ဆုံးအလောင်းအစားဖြစ်ပါသည် 0.20 နှင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် £40.
စည်းစိမ်ဥစ္စာ၏ဘုရင်မ ကစားသမားမှလျောက်ပတ်ကိုအနိုင်ပေးကတိပေးထားတဲ့ရှာဖွေနေအလွန်ကောင်းသောအီဂျစ်ပုံစံ slot ကဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါအပြည့်အဝရက်ကြောင့်မှားယွင်းရိုင်းနှင့်ရက်ကြောင့်မှားယွင်းကိုယ်ပွား features တွေကိုတော်တော်အထင်ကြီးကြသည်နှင့်ကကစားနေစဉ်သင်တစ်ဦးနှံ့နှံ့စပ်စပ်ဖျော်ဖြေရေးပါစေ.